Ingabe ingcindezi ingadala umfutho wegazi ophakeme? | Ukuhlolwa - Izindaba | Septhemba 2021
Umphakathi Izindaba, Wellness Izindaba Izidakamizwa Vs. Umngani Izilwane Ezifuywayo Ezokuzijabulisa Ezempilo Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Imidlalo Imininingwane Yezidakamizwa Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Inkampani, Izindaba Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Inkampani, Imfundo Yezempilo
Main >> Izindaba >> Indlela ubhadane oluthinta ngayo umfutho wegazi lakho
Indlela ubhadane oluthinta ngayo umfutho wegazi lakho
OKUSHA KWE-CORONAVIRUS: Njengoba ochwepheshe befunda kabanzi nge-coronavirus yenoveli, izindaba nolwazi lushintsha. Okwamuva ngobhubhane lwe-COVID-19, sicela uvakashele Izikhungo Zokulawulwa Nokuvikelwa Kwezifo .
U-2020 ube unyaka oyinselele ngezizathu eziningi, ikakhulukazi ngenxa yobhadane lwe-COVID-19. Njengoba amacala eqhubeka nokwanda emhlabeni jikelele, kukhona ukwanda okufanayo ezindabeni zezempilo ezingalindelekile-ngaphandle kwe- izimpawu ezibangelwa i-COVID-19 . Izinkinga zokukhathazeka nezinkinga zempilo yengqondo ziyanda. Izinkinga zokulala zidlangile . Mhlawumbe akumangazi, abaningi bathola ukuthi umfutho wegazi labo nawo uyenyuka — futhi kunezizathu eziningi zalokho.
Kuyini umfutho wegazi ophezulu?
TOukushaya kwegaziukufunda kunezinombolo ezimbili — ngokwesibonelo, 120/80 mm Hg. Inombolo yokuqala, i-systolic, ilinganisa ingcindezi ecindezela igazi elisuka enhliziyweni yomuntu, bese kuthi inombolo yesibili, i-diastolic, ilinganise inhliziyo yomuntu lapho iphumule phakathi kokushaya kwenhliziyo. Ngokusho kwe- Izikhungo Zikazwelonke Zezempilo (NIH) , umfutho wegazi ojwayelekile ungaphansi kuka-120/80 kumuntu omdala. Lapho ukufundwa kuphakeme ngokungaguquki kunalokho, kubhekwa njengomfutho wegazi ophezulu.
Uma umfutho wegazi ophakeme ongalawuleki uza nengozi eyengeziwe yokushaywa unhlangothi nokuhlaselwa yisifo senhliziyo, kuchaza uDanh Ngo, DO, udokotela womndeni oqinisekiswe ebhodini Impilo yase-Edene . Ngenxa yalezi zingcuphe zezempilo, kubalulekile ukwazi ukuthi yini ebanga umfutho wegazi ophakeme — futhi uthathe izinyathelo zokwehlisa, kusuka emithini kuya ekuguqulweni kwendlela yokuphila.
Ingabe ingcindezi ingadala umfutho wegazi ophakeme?
Ukudlula kwezikhathi zokuxineka nokukhathazeka kungadala ukukhuphuka kwesikhashana kwengcindezi yegazi-okujwayele ukuxazulula ngezikhathi ezolile. Lapho uzithola usesimweni esinzima, umzimba wakho ukhipha ama-hormone okucindezela ukukusiza ukubhekana nakho. I-Adrenaline inyusa izinga lokushaya kwenhliziyo, umfutho wegazi namandla. ICortisol inyusa ushukela wegazi nokufinyelela kobuchopho bakho ku-glucose ukuthuthukisa ukusebenza kwengqondo. Umgomo? Impendulo yokulwa noma yezindiza ikunikeza ithuba lokubhekana nosongo olubonakalayo. Lapho ingozi isidlulile, ama-hormone akho — kanye nezinhlelo eziwuthintayo — kubuyela kokujwayelekile.Yinto enhle leyo, ngoba lapho impendulo yakho yengcindezi isebenza njalo, ingadala inqwaba yezinkinga, kufaka phakathi umfutho ophakeme wegazi. Imiphumela yocwaningo ikhombisa ukuthi ukucindezeleka okungapheli kungakhuphula umfutho wegazi ngaphezu kwesikhashana. Umfutho wegazi ophakeme ukufundwa okuningana okungaguquki okungu-120-129 /<80, and umfutho wegazi ophezulu ukufundwa okuningana okuhambisanayo> = 130 /> 80.
Eyodwa funda bathole ubufakazi bokuqala bokuthi ukuhlangabezana, nokucabanga nje, izehlakalo ezicindezelayo kubambezela ukululama kwengcindezi yegazi. Ngaphezu kwalokho, olunye ucwaningo olushicilelwe yi Ijenali ye-American Heart Association , iveze ukuthi ukucindezeleka okubonakalayo okuphezulu ngokuhamba kwesikhathi kuhlotshaniswa nengozi eyengeziwe yokuthola umfutho wegazi ophezulu. Abanye ucwaningo ngithole nokuhlangana phakathi kwengcindezi ehlobene nomsebenzi nokwanda kokufundwa kwengcindezi yegazi le-diastolic ne-systolic emadodeni. Lokho kucindezela kwansuku zonke kunomthelela okhulayo, wesikhathi eside empilweni yakho njengokuhlaselwa yinhliziyo, isifo sohlangothi, ukwehluleka kwezinso, noma ukuphathwa yikhanda.
Umphumela oseceleni wama-hormone okucindezela okhukhula njalo uhlelo lwakho uvinjelwe ukugeleza kwegazi. Lokhu kufana nokuthi uzama ukuphuza otshanini obushukumisayo ngokuqhathaniswa nosayizi ojwayelekile wokuphuza utshwala, ngokusho kweLaTosha Flowers, MD, udokotela wezemindeni nomsunguli we IMed Concierge nokuningi . Lapho inhliziyo yakho kufanele isebenze kanzima ukuphusha igazi emzimbeni, yandisa umfutho wegazi. Kalula nje lapho i-cortisol iphakeme, kanjalo nengcindezi yegazi lethu, kusho uDkt Flowers.
Umphumela wobhadane kumfutho wegazi
Ubhadane lwe-COVID-19 lwenyuse amazinga okucindezeleka nokwesaba abantu emhlabeni wonke. Izinga lokufa okulimazayo kwaleli gciwane, umthelela wokuvalwa kwezwe lonke, kanye namazinga aphezulu okuntuleka kwemisebenzi yizinkathazo ezimbalwa ezivamile. Yonke leyo mizwa emikhulu iyayithinta ingcindezi yakho yegazi — futhi izindlela ezingezinhle zokubhekana nesimo zingenza izinto zibe zimbi kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ukunakekelwa okujwayelekile kwezokwelapha kuvame ukubambezeleka noma kukhanselwe njengoba izinhlelo zesibhedlela zikhungatheka ukunakekela abantu abagula nge-coronavirus yenoveli.
Lezo zinto ezihlanganisiwe ziyindlela yokuqhuma kulabo abanenkinga yomfutho wegazi ophakeme ngisho nokuxilongwa komfutho wegazi ophezulu okusha kubantu ababengathintekile phambilini. Kungumkhuba okhathazayo ngoba umfutho wegazi ophakeme usohlwini lwe- Izikhungo Zokulawulwa Nokuvikelwa Kwezifo (CDC) izici zobungozi bezinkinga ezivela ku-COVID-19. Nazi izindlela ezimbalwa lolu bhubhane — futhi olungahle lube nomthelela ekucindezelekeni kwegazi lakho:
1. Ukucindezela okuqhubekayo nomfutho wegazi
Njengodokotela wokunakekelwa okuyisisekelo, nakanjani ngibona abantu ababhekene nomfutho wegazi ophakeme ongalawuleki ohlobene nemiphumela ye-COVID-19, uDkt Flowers uchaza lokho akubonile kulo mkhuba wakhe. Okokuqala, kukhona ukukhuphuka kwemvelo kokwesaba kwethu okungaziwa, okuholela ekutheni abantu abaningi bakhathazeke noma bathuke. Okwesibili, abantu kuye kwadingeka babhekane nokufa okusheshayo kwamalungu omndeni, abangani, abantu osebenza nabo, nalabo ohlanganyela nabo ngenxa yalolu bhubhane, futhi lokhu kudala ukukhathazeka nokudangala.
Kunokungaqiniseki okusabalele mayelana nokuthi ikusasa liphetheni, kanye nezingcindezi ezinkulu ezinjengokuntengantenga kwezezimali, ukuhlala wedwa emphakathini, kanye nemikhawulo emisebenzini yansuku zonke, konke okube nomthelela ekukhuleni komfutho wegazi ophezulu ngenxa yobhadane lwe-COVID-19, kusho uDkt Flowers.
Futhi kufanele wazi ukuthi kungenzeka ukuthi ubhadane ludala izigaxa ezintsha zomfutho wegazi ophezulu ezigulini ngaphandle kokuxilongwa komfutho wegazi ophezulu.
Ubhadane lomhlaba jikelele seludale izinguquko ezinkulu ezimpilweni zabantu zombili kusuka ezimeni zomphakathi nezomnotho, kuchaza uParis Sabo, MD, udokotela ohlinzayo womdlavuza webele eBeverly Hills futhi ongumsunguli UDkt Brite . Lezi yizimbangela ezinkulu zokuxineka nokukhathazeka. Noma le mizwa kungeyona imbangela yengcindezi ephezulu yegazi, ingadala izipikili zesikhashana kumfutho wegazi, noma kubantu abaphilile.
2. Izindlela zokubhekana nezimbi
Ezinye zezindlela zokubhekana nesikhathi esifushane esingabuyela kuzo ngezikhathi zokungaqiniseki nazo zingaba nomthelela ekuthuthukiseni umfutho wegazi ophezulu wesikhathi eside. Ingcindezi nokukhathazeka kungadala ukuthi abantu bathathe imikhuba engenampilo efana nokubhema, ukuphuza nokudla ngokweqile, okungakhuphula ingozi yomuntu yokuba nomfutho wegazi ophezulu isikhathi eside, kusho uDkt. Sabo.
3. Izikhala ekunakekelweni kokuvikela
Lapho okwenziwa ngokomzimba okwenziwa minyaka yonke, noma ukuhlinzwa okungakhethwa kuhlehliswa ukugwema ukuvezwa yigciwane, maningi amathuba okuthi umfutho wegazi obukade ulawulwa ungaqala ukubhebhetheka ungalawuleki. UDkt Ngo uyaphawula: Ukulandelelwa kokuvakasha kubonise ukwehla okukhulu kokuvakashelwa kwamahhovisi ngesikhathi sokuqhamuka kwalo bhubhane kanye neqhubu elihambisanayo kumaphesenti eziguli ezinengcindezi yegazi engalawulwa. Kanye nokwanda kwezimo ezicindezelayo nokungaqiniseki, umfutho wegazi ukhuphuka kakhulu kunokujwayelekile ngalesi sikhathi. Ngisho nokuzihlola kungaba nzima kulabo abangenabo abaqaphi bomfutho wegazi emakhaya, njengoba amakhemisi amaningi nezitolo zokuthengisa zikubekele eceleni ukufinyelela kulezi zinsizakalo ngesikhathi sobhadane.
4. Ukuba sengozini kwezinkinga ze-COVID-19
Ukuba nomfutho wegazi ophezulu akunyusi ubungozi bakho bokuthola i-COVID-19, kusho uDkt Flowers, kepha uma umuntu enesifo senhliziyo esikhulu esivela ku-hypertension engalawuleki, khona-ke umuntu usengozini enkulu ebucayi bokutheleleka futhi unokwehla kwezinga lokusinda. Izinkinga zingafaka amahlule egazini emaphethelweni noma emaphashini, noma isifo sohlangothi.
Ngokwengeziwe, ukuba nomfutho ophakeme wegazi kuholela engcupheni ephezulu yokuthola isifo senhliziyo. i-CDC okutholakele kusikisela ukuthi i-COVID-19 ingalimaza impilo yenhliziyo, ibangele i-myocarditis, noma ukuvuvukala kwesembozo senhliziyo, esaziwa njenge-pericarditis. Ngamanye amagama, ifaka engcupheni uhlelo eselivele lwenziwa buthaka ngumfutho wegazi ophezulu.
Ungayilawula kanjani ingcindezi yegazi lakho?
Uma ukucindezeleka nokukhathazeka yikhona okubangela ukuguquguquka kwengcindezi yegazi lakho, kungokwemvelo ukucabanga ukuthi umuthi wokukhathazeka yisixazululo esihle kunazo zonke. Ngenkathi ucwaningo oluthile kubonisa ukuthi kuyasiza ezimweni ezithile, akubhekwa njengokwelashwa komugqa wokuqala. Esikhundleni salokho, zama lezi zinguquko eziqinisekisiwe zedokotela nezindlela zokuphila ukuze izinto zibuyele ngaphansi kolawulo.
1. Imithi yengcindezi yegazi
Umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo angancoma ukuthatha imithi, njenge Ama-ACE inhibitors , ukuphatha umfutho wegazi ophakeme nezimpawu zawo ezilandelayo. Uma ukufundwa kwengcindezi yegazi lakho kuphakeme ngokungaguquki kunokujwayelekile, ukukhuluma nochwepheshe wezokunakekelwa okuyisisekelo kuyinto ebaluleke kakhulu, ngisho (futhi ikakhulukazi) ngesikhathi sobhadane.
I-bupropion isebenza kanjani ekuyekeni ukubhema
OKUSHIWO: Imithi yengcindezi yegazi kanye nokwelashwa
Ukuthola ukufundwa kwengcindezi yegazi lakho kubaluleke kakhulu, futhi uma ukucindezeleka nokukhathazeka kukwenza ube nomfutho wegazi ophezulu, khona-ke ukuphathwa kwengcindezi kubalulekile. Lapho imizwa yakho izizwa ingalawuleki, uchwepheshe angakusiza wakhe amasu okubhekana nakho. Uma ubona izimpawu eziningi zokuxineka noma zokukhathazeka, funa ukwesekwa kokwelashwa okuvela kumhlinzeki wakho wokunakekelwa okuyinhloko noma uqale ukunakekelwa ngudokotela, uDkt Ngo uphakamisa.
OKUSHIWO: Ungamthola kanjani umelaphi ngesikhathi kubhebhetheka
3. Izinguquko zendlela yokuphila
Ukuguqulwa kokudla nokusebenza komzimba kungasiza ekwehliseni umfutho wegazi. UDkt Ngo uncoma ukuthi:
Gcina ukudla okunempilo, okunomsoco ophansi kasawoti nge-hydration efanele
Yenza ukuzivocavoca umzimba nsuku zonke ukuze ukhulise imizwa yakho futhi uthuthukise umfutho wegazi
Thola ubuthongo obuhleliwe obenele, obuhleliwe ukuvumela umzimba wakho ukuba uphumule futhi uvuselele.
Yeka noma unciphise ukusetshenziswa kwe-caffeine
Zindla noma usebenzise ukucabanga
Ukuyeka ukubhema, ukuqhuma, noma ukusebenzisa ugwayi, ukwehlisa isisindo, nokunciphisa ukuphuza utshwala nakho kungasiza ekwehliseni umfutho wegazi.
OKUSHIWO: Ungayinciphisa kanjani umfutho wegazi ngokushesha futhi ngokwemvelo
4. Ukuqapha nsuku zonke
Qiniseka ukuthi une-othomathikhi yegazi yokuhlola umfutho wegazi lakho ekhaya nsuku zonke, uDkt Ngo uncoma. Ukuthenga i- ekhishini lokuqapha ekhaya , kanye nokwabelana ngokufundwayo nethimba lakho lezokunakekelwa kwempilo, kungabasiza ukuthi balungise imithi yakho ukufeza izinhloso zomfutho wegazi. Shayela umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo nganoma yikuphi ukukhathazeka, futhi ungalibali ukuthola usizo oluphuthumayo ngenxa nje ye-COVID-19. Futhi, okubaluleke kakhulu, qiniseka ukuhlela ukuhlela njalo nokuhlolwa noma ngabe kuya ngokuvakasha kwamahhovisi noma ukuvakashelwa nge-telemedicine.
Ukuphila ngesikhathi sobhadane lomhlaba wonke kungacindezela ngokumangazayo, futhi igciwane elibi lokujikeleza kwegazi kungenza ukukhathazeka okujwayelekile kwezokwelapha kubonakale kungabalulekile kangako. Ungazinaki izimpawu ezintsha, futhi uhlale uqaphile ngempilo yakho. Kunezindlela eziningi zokufuna ukwelulekwa nodokotela ekhaya lakho.
I-Pepcid vs Zantac: Umehluko Omkhulu nokufana
I-Acetaminophen vs. ibuprofen: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
indlela yokunciphisa umfutho wegazi ophakeme ngokwemvelo
kufanele owesifazane athathe malini i-d3
kufanele uthathe i-tamiflu ukuvimbela umkhuhlane
kusho ukuthini uma amazinga e-creatinine ephezulu